Manara-maso, jereo mari-pamantarana, ny SMS hafatra, ary kokoa Joker fanitsiana Chatroulette
tsy tapaka ny miatrika olana rehefa tonga ny fihazonana ny famerana amin’ny mpampiasa izay scoundrel sy ny fampielezana tsaho momba ny olona hafa. Noho izany, dia nisy olana notaterin’ny hafa ara-dalàna ny mpampiasa sy ny fahaverezan ny fifamoivoizana ho azy ireo. Satria misy maro ny olona izay mampiasa na fanararaotana izany toerana, ary izany mazàna, mba hahatonga ny fanelingelenana ny mpampiasa, midira ao toy ny mpampiasa, izay efa nandray ny fahefana. Amin’izao fotoana izao, ny fanompoana misy ihany ho an’ny olona be taona no ho miakatra. Ny toerana dia natao mba hametraka lalàna henjana ny fepetra noraisina. Amin izany fomba izany, ireo mpampiasa dia afaka strip, na hijoro naked teo anoloan’ny fakantsary mandray anjara amin’ny ratsy, ary ny firaisana ara-nofo azo misoroka.
Mba ho ny mpampiasa mba ho voaray tao, ary azo ampiasaina ho toy ny windows ny asa fanompoana, izany dia mampiseho ny tsapaka niteraka SMS fehezan-dalàna. Ny mpampiasa dia tsy maintsy hiditra ao amin’ny fehezan-dalàna izay dia nalefa tany amin’ny finday, ary ianao dia ho afaka mampiasa ny asa fanompoana. Izany sosotra maro ny mpampiasa, rehefa tsy maintsy mampiasa ny nomeraon-telefaonina mba hahazoana ny amin’ny chat.
Tsy azo atao ny manana maro mpampiasa
Ny olana amin’ny fomba ity dia ny hoe tsy misy maro ireo mpampiasa izay tsy manana ny finday, fa tsy te hiresaka. Noho io antony io, ireo mpampiasa izay tsy manana fahafahana miditra amin’ny telefaonina, dia tsy ho afaka mampiasa ny antso asa fanompoana. Ny olana faharoa dia ny hoe ny olona hahita fa ny fehezan-dalàna ny rafitra ho an’ny SMS indraindray tsy miasa araka ny efa nampoizina, ary ireo mpampiasa hijaly ela ny fe-potoam-toerana ny fanakanana.
Ny toerana dia manolotra diso-maimaim-poana amin’ny chat
Na izany aza, dia tsy mametra ny ireo mpampiasa mba misy ny toe-javatra. Isika dia ao ny toerana misy mandràra ireo mpampiasa izay manao tsy ilaina ny asa eo an-toerana. Izahay mpiara-miasa, na kisendrasendra ny olona fa ny tena tanjony, ary vahana chat fampiharana, dia hamono ny fahasorenana sy ny hamorona toerana iray ho an’ny vahoaka mba tsy hivoaka. Izany no nanamarika fa rehefa fampiharana ny fepetra maro, ireo mpampiasa ny fiarovana olana, sy ny mpampiasa dia tsy misalasala ny mampiasa ny service. Didy amam-pitsipika fepetra tokony ho apetraka amin’ny roa tonta, ary tokony ho ilaina ny fampiharana azy. Raha toa ka ny toerana dia afaka mandray andraikitra sy ny mpampiasa mbola mampiasa azy io mba hanao diso, dia izany no ho amin’ny dingana manaraka. Noho izany, ny mpampiasa dia tokony ihany koa ny manaraka ny fitsipika sy ny tsy hampiasa ny toerana ho an’ny lehilahy miray amin’ny lehilahy sy ny hafa Miboridana fitondran-tena. Tsy misy fisoratana anarana sy ny kaody SMS, dia afaka ho mifanentana amin’ny olona haingana ary tsy misy ahiahy, eo amin’ny lafiny fotoana. Izany no zavatra tsara indrindra manaraka ataonay ho an’ny mpanjifa ho tia tsy tapaka amin’ny chat
Mampiaraka ao Shina sy Ny Fiakaran'ny 'Mitanjaka Fanambadiana' →